Global Voices teny Malagasy » Kazakhstana: Mpilalao Pôlitika Novàna Toerana · Global Voices teny Malagasy » Print
Kazakhstana: Mpilalao Pôlitika Novàna Toerana
Voadika ny 06 Marsa 2018 6:51 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Vero
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika
(Fanamarihana:lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2008)
Mety miseho ho mangina sy mipetrapetraka ny sehatrin'ny pôlitika ao Kazakhstana manoloana ny parlemanta iray anjakan'antoko tokana sy ny filoha efa ela nipetrahana. Fa ao anatiny ao, tena mihetsiketsika – firehetampo sy fifandrafindrafiana no mamoky ny rantsam-panjakana sy ny vondron'ny mpanohitra. Tsy hitan'ny vahoaka ny fifaninanana eo amin'ireo vondrona ireo ary tsy dia tena demokratika tokoa. Ny tena izy, na efa mihamanantona aza ny hitantanan'ny firenena ny OSCE amin'ny 2010, mbola hijanona ela eny ary mbola hitohy izao karazana rafitra pôlitika izao:
“Afaka manadino ny fampanantenana rehetra nataon'i Kazakhstana momba ny fametrahana ny demokrasia ireo manampahefana ao amin'ny OSCE. Ny fampanantenana rehetra, takalon'ny nahazoanay ny vatonareo hakanay ny fitantanana. Ho an'ireo sasany aminareo izay manana olana amin'ny fahatakarana izany, nanazava maina be tao anaty sntdsfs ho an'ny Reuters ny filohan'i Kazakhstana: “Voafidy ho mpikambana tanteraka ao anatin'ny Fikambanana izahay, ary tsy manana fampanantenana hafa na dia kely aza”, hoy i Arseny nanoratra  ao amin'ny neweurasia
Kanefa, tsy tena tsiambaratelo ho an'ny ankamaroan'ny Kazakhstana ny hoe tsy hiraharaha ny OSCE ny governemantany ary hiala bàla amin'ny fanavaozana. Izay no mahatonga ny fanovàna toerana ny ben'ny tanàna tamin'ireo tanàna lehibe anankiroa ho olana fotora tao anaty fandaharampotoana. Nataon'ny Fampitàna ny Afo Olimpika tonga alohan'ny fotoana ao Almaty, renivohitra taloha, tanàna lehibe indrindra ary foiben'ny raharahambarotra. Tanàna voalohany i Almaty teo amin'ny hazakazaka erantany ho an'ny fanilo, ary nakarakarain'ny fitantanan'ny Almaty tsara ny lanonana, nitondra “zavatra mahaliana be ho an'ny ankamaroan'ny Almatiana”, nitatitra  i Adam.
Na izany aza, namela ny tanàna falifaly ny filoha Nazarbayev, izay voalohany nihazakazaka niaraka tamin'ilay fanilo, ary ny ampitson'iny nanendry ny ben'ny tanànan'i Almaty, Tasmagambetov mba ho lohan'ny fitantanan ao Astana, ny tanàna renivohitra, izay hanaovana fankalazana goavambe ho an'ny faha-10 taona amin'ity taona ity. Nahafaly, nifanandrify tamin'ny Andron'ny Tanàna ny tsingerintaonan'ny Filoha Nazarbayev , izay miantso ny tenany ho “mpanamboatra voalohany an'i Astana” taorian'ny nandidiany ny hamindràna ny renivohitra tsy ho ao Almaty.
Lasa feno fihetsehampo ny tontolon'ny bilaogy, izay mipetraka ao Almaty ny ankamaroany. Feno fanehoankevitra maro ny Almaty community tao amin'ny LiveJournal, feno nenina, satria i Imangali Tasmagambetov nanamboatra fijery matotra sy tsara tamin'ny fanamboarana ireo làlana sy sampanan-dàlana, tetikasa vaovao sahisahy amin'ny maritrano sy ny fandaharanasa fanarenana ny fivoaran'ny tanàna izay nikendrena ny fanadiovana ireo renirano, hanamboarana ny olan'ny famatsiana herinaratra ary handaminana ny tokontany:
“Imangali, halahelo anao izahay”, hoy  i dass. “Vao nanomboka ny nifalifaly mihitsy aho, dia lasa ny ben'ny tanàna”, tezitra koa i ehot [ros]. Ny tena olana mampiasa saina ny mponina ao an-tanàna dia ny hoe mety hahena daholo ireo fandraisana an-tànana ho fampandrosoana rehefa eo ambany fitondràn'ny ben'ny tanàna vaovao – minisitra taloha nisahana ny toekarena ambanivohitra, Ahmetjan Yesimov, solontenan'ny atao hoe “mpiambina tranainy” ary, araky ny tsaho, zanakin'ny iray tampo amin'ny filoha Nazarbayev :
“Raha raisina anaty kajy ny loza be ao amin'ny toekarenan'ny ambanivohitra ao amin'ny firenena, tena matahotra be ho an'ny hoavin'ity tanànantsika ity aho”, nizara  ny tebitebiny i pulemetchizza [ros].
.Mandritra izay fotoana izay, mahita ny fanovàna toerana ao amin'ny governemanta ho toy ny fisondrotana ho an'i Tasmagambetov ny ankamaroan'ny bilaogera. Niteny  i Kolobol avy ao amin'ny zakon.kz: “Imangali no filohantsika manaraka, raha ny fahitàna azy”. Raha jerena ny fitsampankevitra natao teo anivon'ny vahoaka, hinoana fa ny ben'ny tanànan'i Almaty taloha no mpanao pôlitika faharoa manampahefana indrindra ao amin'ny firenena – faharoa eo manaraka ny filoha. Manipika  ity zava-misy manaraka ity i Megakhuimyak:
“Mahaliana ny fomba nanombohany ny asany tao Astana. Voalohany indrindra, nandidy ny hampanaovana — tao anatin'ny 48 ora — fitsampankevimbahoaka izy mba hanangonana ny hevitra sy sosokevitry ny fiarahamonina momba ny tanàna sy ny filàny. Fitondranten'ny olona iray mpanao pôlitika io, fa tsy anà manampahefana iray” [ros]
Mahaliana fa nisy fisehoanjavatra iray nialoha an'ilay fanovàna toerana. Nisamborin'ny pôlisin-ketra noho ny resaka kolikoly ny Lehiben'ny Kazakhstan Railways, orinasan'ny fanjakana. Tsy mino ny mpijery fa rangahy miaraka amin'ny fahaizana ambony sy minisitry ny toekarena teo aloha no voasambotra taminà vola kely 100.000 dollara teo akaikin'ny tranony. Ataon’  i Sarimov safobemantsina: “Vetivety sy toy ny namboarina mialoha ireo fanovàna toerana rehetra (ben'ny tanàna taloha tao Astana lasa lohan'ny Railways), ka tahaky ny toe-javatra mety tsara ilay raharahan'ny lehiben'ny Railways” [ru]
Tao anaty lahatsoratra iray hafa, maneho  ny heviny mahakasika ny fomba fijerin'ny “fanoherana voafehy” i sarimov:
“Mihodinkodina aminà antoko roa ankehitriny ny fitantanana ny asa maha-filoha amin'izao fotoana izao, samy saribakoly ary mpomba ny governemanta avokoa izy roa. Naseho tamin'ny fomba mahery ny mpitarika azy ireo, navoaka tao anaty gazety ofisialy. Fantatro ito lakozia ito – tsy nanonta printy teny iray momba azy ireo ry zareo raha tsy efa nisy baiko avy any ambony. Tahaka ny hoe te-hanandratra fanoherana vaovao izy ireo, mandritra izay tsy maintsy manjavona sy adinoina ny fanoherana teo aloha… Handeha ve izy io no fanontaniana mipetraka” [ros]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/06/115968/